ज्योतिषका अनुसार ,यी बार जन्मने मानिस जीवनमा धेरै सफल हुन्छन, तपाइ कुन बार जन्मनु भयो ? – Khabar PatrikaNp
ज्योतिषका अनुसार ,यी बार जन्मने मानिस जीवनमा धेरै सफल हुन्छन, तपाइ कुन बार जन्मनु भयो ?
September 24, 2020 204
तर यिनीहरुलाई २० देखि २२ वर्ष सम्म दुःख हुन्छ । स्त्री – आइतबार जन्मिने स्त्री दान–पुण्य गर्ने र बलशाली एवं चतुर हुन्छन् ।सोमबारः पुरुष – सोमबार जन्मिने ब्यक्तिको बोली मिठो हुन्छ ।
यस्ता ब्यक्तिको जीवनमा सुख दुख बराबर जस्तै हुन्छ किन भने उनीहरुलाई दुःख सुख उस्तै उस्तै लाग्छ । सोमबार जन्मिने ब्यकेति विद्वान, कला कुशल र बहादुर पनि हुन्छन् । सोमबार जन्मिने ब्यक्तिलाई श्वास प्रश्वासको रोग हुन सक्छ यस्ता ब्यक्तिलाई ९, १२, २७ वर्षमा कष्ट हुन्छ ।
– स्त्री : सोमबार जन्म भएका महिला सुन्दर हुन्छन् । यस्ता महिलामा मिठो बोली र शान्ति प्रिय र पुत्रवति हुन्छन् ।
-स्त्री : ज्योतिषका अनुसार मंगलवार जन्म भएका स्त्री कठोर हृदयका हुन्छन् यस्ता स्त्रीमा दया माया कम हुन्छ । यस्ता स्त्री दुब्ला पातला र झगडालु समेत हुन्छन् ।बुधबारः पुरुष – बुधबार जन्मिने ब्यक्ति धर्मकर्ममा मन भएका हुन्छन् । यिनीहरुको बोलीमा मिठास हुन्छन् । यिनीहरुको ८ र २२ वर्षको उमेरमा कष्ट पाउने योग हुन्छ । – स्त्री : बुधाबार जन्मिने स्त्री कुनै विशेष क्षेत्रमा रुचि राख्ने र विशेषज्ञता हासिल गर्ने हुन्छतन् ।
सरस्वतीको विशेष कृपा हुने हुँदा यिनीहरु सुन्दर र शुसील पनि हुन्छन् ।
– स्त्री : जुन स्त्रीको विहीबार जन्म हुन्छ त्यस्ता महिला उच्च शिक्षा हासिल गर्ने र सर्वगुणी हुन्छन् ।
शुक्रबारः पुरुष – शुक्रबार जन्मिने ब्यक्ति हँसिलो स्वभावका हुन्छन् । बुद्दीमान र मृदुभाषी यिनीहरुको स्वभाव हो । यिनीहरु सहनशिल पनि हुन्छन् । यिनीहरु शौखिन हुन्छन् र २० र २४ वर्षको उमेरमा कष्ट हुन्छ । –
स्त्री : कुनै पनि स्त्री शुक्रबार जन्मेकी छे भने उसको श्वभाव चंचल हुन्छ । यस्ता स्त्री मस्ती मजाक गर्छन् । परिवार र समाजमा विशेष इज्जत हुन्छ । केही काला रंगका भएपनि सुन्दर हुन्छन् ।
Prevबिहिबारको दिन विष्णु भगवानको यसरि पूजा गरौ ….! शुभफल प्राप्त हुन्छ !
Nextमागेको पुरा हुने अकलादेबी मन्दिर सन्ध्यकालिनमा यस्तो देखियो
लक्ष्मी-गणेशको पूजामा यी चीजहरूको प्रयोग गर्नुहोस्,भाक्कल गरेर अहिलेसम्म पुरा नभएका सम्पूर्ण एक हप्तामै हुनेछ पुरा,बेवास्ता नगरी पढ्नुहोस
समुद्रशास्त्रमा शरीरका यी ४ भागमा कालो कोठी हुनु निकै शुभ मानिन्छ
बिस्वकै महँगो सर्प, जसको मूल्य एउटा जहाज बराबर छ